7 Talaabo oo loogu talagalay Guusha Suuqgeynta Nuxurka | Martech Zone
7 Talaabo oo loogu talagalay Guusha Suuqgeynta Mawduucyada
Ma noqon karto su'aal dambe oo ku saabsan qiimaha iyo waxqabadka istiraatiijiyad suuq geyn ah oo adag. Ganacsigaagu wuxuu u baahan yahay garaaca wadnaha joogtada ah ee ka kooban waxyaabaha ka soo baxa taas oo soo jiidanaysa dareenka rajada, dhisaysa awooddaada iyo aaminaadda khadka tooska ah, ugu dambayntiina waxay u horseedaysaa beddelaad marinnadaaga suuq-geynta iyo dibedda. Lama yaabin tan infographic laga soo qaatay Smart Insights - laakiin dhisida a istiraatiijiyad suuq geynta waxyaabaha ku tartamaya waxaa si fiican loogu qaabeeyey qaabkan faseexeysan ee fudud ee la shiidi karo.
Si lagaaga caawiyo inaad dib u eegto ama aad jaangooyo u sameyso sida ugu wanaagsan ee aad ula tartamayso suuqgeyntaada, tallaabo kasta oo shaxanka ah, waxaan ku soo daray cilmi baaris ku habboon tan bilaashka ah Maareynta Suuqgeynta Mawduuca ee warbixinta cilmi baarista ee 2014 Smart Insights ayaa lagu abuuray Hubspot.
7-da Talaabo ee Loogu Talagalay Guusha Suuqgeynta Mawduucyada
cabbirka isticmaalkaaga hadda ee suuq-geynta waxyaabaha ku jira.
Samee suuq geyn istaraatijiyad.
Fahmaan macmiilka iyo sumadda baahida ka kooban
Samee caqli badan maalgelinta xagga suuqgeynta
Xulo kuwa ugu fiican qaso ee kheyraadka.
Abuur waxyaabaha ugu wax ku oolka badan qaababka.
Isticmaal Analytics in dib loo eego ROI iyo qiimaha.
Digniinta Webinar: Ku-beddelashada Sheekada
Crittercism: Kormeerka Waxqabadka Codsiga